Sidee nabadgelyo loo dhiso dib-u-dhiska cusub ee abuuritaanka iyo dhiirigelinta?
Waxaan aaminsanahay in habka ugu fiican ee dhismaha cusub loo dhisi karo si wanaagsan oo ku xiran boggagaaga ama blog-kaaga ayaa abuuraya waxqabad gaar ah oo bixiya qiimaha dhabta ah ee akhristayaasha. Sidaa darteed, haysashada sifo tayo sare leh oo kor u qaadida habka saxda ah ayaa si dabiici ahaan ah u kordhin kara caanahaaga bulshada dhexdeeda, adiga oo soo saaraya saamiyo badan, hogaamin, raacitaanka, liis garaynta, iyo dabcan, dhisida dib-u-celin cusub. Iyo content creation mar walba bixiso - content aad u qiimo badan ee aad heshay, fursadaha ay u fiican tahay in la qadariyo user, iyo xiriir la leh ka dib dhan.
Laakiin sidee bay nabadgelyo u tahay dhismaha cusub ee boggaaga ama blogka oo leh nuxur adag oo ku saabsan mowduucyo caan ah oo si fiican loo dalbaday? Furaha muhiimka ah ee arrintan ayaa ah in makiinadaha raadinta waaweyn ee sida Google ah laftoodu doonayaan in gadaal kasta oo la xidhiidha waxyaabaha la daabacay. Waxay micnaheedu tahay in dhabarka noocaas ah waa in tifaftirka laga xaddidaa dhinac ka mid ah isku xirka ilaha saddexaad. Si fudud u dheji, dhamaan isku xidhyada oo dhan si toos ah ayey u dhisaan (iwm., Iyada oo aan laheyn xakamaynta tifaftirka dhabta ah) waa mid xun (haddii kale, kuwa tayadoodu hooseeyso) laga soo bilaabo aragtida Google search engine. Dabcan, tan "qeexitaan" waa la kormeeray, laakiin waxay macno samaynaysaa. Sidaas awgeed, aynu wajahno - u qaadashada dhismo isku dhafan oo gardaro ah, ama nidaam wax lagu xalliyo si loo helo wax badan oo ka mid ah suurtagalnimada dhab ahaan hubaal maaha in la sameeyo waxyaabo, kuwaas oo aan waxba ka qaban ammaankaaga ka dhanka ah rikoodhka Google.
Marka, marka ay timaaddo guud ahaan la aqbalo oo si buuxda u ah nabadgelyo loogu dhisayo dib-u-qabasho cusub oo ku jira maaraynta kumbiyuutarrada, halkan waa farsamooyinka ugu muhiimsan ee abuuritaanka iyo dhiirigelinta loo isticmaalo website-ka ama blog-kaaga. Waxaan doonayaa inaan ka boodo xulashada tafaftirka cad (sida wareysiyada, joornaalada, baasto isku xirka, iwm.) Si ay kuu tusaan siyaabo kale oo loo dhiso dib-u-kobcin cusub. Waxay ubaahan yahiin wax caddayn ah oo ku saabsan waxa si dhab ah u dhigaya inay u muuqdaan kuwo ammaan ah indhaha Google. Sidaa daraadeed, aan u hayno si dhakhso ah iyaga oo loo maro.
Martida martida - ugu horreyntii, bogga isku xira ama blogku wuxuu leeyahay doorashadiisa gaarka ah si uu u aqbalo ama uusan u tixgelin dakhligaaga . Dabcan, waa in ay jirtaa kantaroolin qoraal ah oo loogu talagalay dhammaan gadaalooyinka cusub ee ku jira maqaaladii dhawaan la daabacay ama blog post.
Soo gudbinta Tilmaamaha - u gudbinta wixi ay dib-u-eegaan dhammaan soo gudbinta waxay noqon lahaayeen kuwo amaan ah marka ay sii wadaan xakamaynta tifaftirka (haddii kale, haddi ay diideen dhamaanba goobaha iyo blogyada ee tayada hoose).
War Saxaafadeed iyo Ilaha Warbaahinta - Iyaga oo la shaqeynaya waa sax haddii ay soo saaraan sheekooyinka soo noqnoqda oo kaliya hadiyadaha saxda ah ee saxda ah iyo wax kale. Xasuuso, noocan ah boggaga internetka ee loogu talagalay in loogu qaybiyo, maaha isku xirka hore.
Blog Comments - tixgelinta in doorashada tifaftirka sida caadiga ah ay si toos ah u leedahay blogger, tirada kaliya ee la soo xulay ee blogska ugu sareeya waxay noqon kartaa mid ku filan oo loogu talagalay dhisidda backlinks leh qaar ka mid ah runtii fahmi iyo tayo sare leh faallooyin.
Istaraatiijiyooyinka la xiriira, Niche Community, iyo Su'aalaha Suuqa - waxay noqon lahaayeen goobo aan ammaan ahayn oo loogu talagalay dhismaha isku xirnaanta abuurista iyo dhiirrigelinta. Sababtoo ah spam kasta waxaa laga tirtiri doonaa wakiilada ogeysiis gaaban ama hoos u dhac ku yimaada beesha maxaliga ah ku dhawaad ​​marnaba Source .